Iindaba - Zithini iimveliso zethu?
Zithini iimveliso zethu?
Okoko yasekwa, inkampani yethu iseke ubume bemveliso ebanzi, kunye nothotho olungaphezulu kwe-10 kunye neemodeli ezili-100 zokuqala iinjini .Inkampani yethu inakho ukuvelisa ngonyaka iiseti ezingama-500000 zabaqalayo ezenziweyo kwilayini yemveliso yelizwe ehamba phambili ngobuchwephesha kunye nezixhobo . Iimveliso zethu eziphambili ziquka BOSCH series, Delco 39MT kunye 38MT series, Mitsubishi series, Bosch series, Prestolite series, Hitachi series njalo njalo. Iimveliso zethu zilungele iintlobo ezininzi zeinjini neeTraki, ezinje ngeeCummins iinjini, iinjini zeDeutz, iTrightliner Trucks, iiDAF Turcks, Scania Trucks, Daewoo Trucks, Iveco Trucks etc, we export many country, Russia, Spain, Brazil, Brazil, Iran, Algeria, ECambodia njalo njalo, uMgangatho wamkelwe kakuhle ngabathengi.
Njengoko sonke sisazi, ukuqala kwe-injini kufuna inkxaso yamandla angaphandle, kwaye ukuqala komatshini kudlala le ndima. Ukuthetha ngokubanzi, ukuqala kokusebenzisa izinto ezintathu ukuqonda yonke inkqubo yokuqalisa. I-DC series motor yazisa ngoku ukusuka kwibhetri kwaye yenza izixhobo zokuqhuba zokuqalisa zivelisa intshukumo yoomatshini; indlela yokuhambisa idibanisa izixhobo zokuqhuba kwiifowuni zentsimbi, kwaye inokucima ngokuzenzekelayo emva kokuba injini iqalile; isekethe yokuqalisa ivuliwe kwaye icinywe siswitshi se-Electromagnetic ukulawula. Phakathi kwabo, injini yeyona nto iphambili ngaphakathi kwesiqalo. Umgaqo-nkqubo wayo osebenzayo yinkqubo yokuguqula amandla ngokusekwe kumthetho we-Ampere esiya kuthi sihlangane nawo kwisikolo samabanga aphakamileyo i-physics, oko kukuthi, isiphumo sombhexeshi onamandla kumazibuthe. Imoto ibandakanya izixhobo eziyimfuneko, umatshini wokuhamba, ipali yemagnethi, ibrashi, ukuthwala kunye nokuhlala kunye nezinye izinto. Injini kufuneka ijikeleziswe ngamandla angaphandle ngaphambi kokuba ihambe ngokwayo. Inkqubo ye-injini eguqukayo isuka kwimeko emileyo iye ekubeni nakho ukuzisebenzela ngokwayo ngamandla angaphandle ibizwa ngokuba yi-injini eqala. Iindlela zokuqala ezisetyenziswa njengesiqhelo zeinjini zibandakanya ukuqala kwesandla, ukuqala kweenjini zepetroli kunye nokuqalisa kombane. Isikhokelo sokuqala samkela intambo okanye isandla esincinci, esilula kodwa esingathandekiyo nesinamandla. Ilungele kuphela ezinye iinjini ezinamandla asezantsi, kwaye igcinwe kuphela njengendlela yogcino kwezinye iimoto; Injini yepetroli encedisayo eqala ikakhulu isetyenziselwa iinjini zamandla aphezulu. Kwiinjini zedizili; indlela yokuqala yombane kulula ukuyisebenzisa, iyakhawuleza ukuqala, inako ukuphinda ukuqala, kwaye inokulawulwa ukude, ke isetyenziswa kakhulu ziimoto zangoku.
Umsebenzi wethu "kukubonelela ngeemveliso ezinokuthenjwa kunye namaxabiso afanelekileyo". Samkela abathengi kuzo zonke iimbombo zehlabathi ukuba banxibelelane nathi kubudlelane beshishini kwixesha elizayo kunye nokufezekisa impumelelo efanayo!